Odida obodo Lighting | Ikanam Wall Washer | Ikanam ọdọ mmiri ọkụ | xLedLight.com
Igwe ọkụ ihu ala
Ingund Ikanam ọkụ
Egwuregwu Wall Wall
Ikanam ọdọ mmiri ọkụ
CNC Igwe ọkụ
Egwuregwu Wall Wall Igwe ọkụ ihu ala Ikanam ọdọ mmiri ọkụ
LongNor Optoelectronics Co., Ltd. na-eduga Igwe ọkụ ihu ala, Egwuregwu Wall Wall, Mgbanwe Led Linear emeputa & soplaya e guzobere na 2008 na ihe karịrị 200 ndị ọrụ dị na Shenzhen China. Anyị na ngwaahịa na-bụ-eji maka ọkụ ụka, ọkụ ịgba cha cha, họtel ọkụ mma ụlọ, ọkụ obibi, ọkụ azụmaahịa na ọkụ ụlọ ọrụ. Companylọ ọrụ anyị malitere imepụta ikanam neon flex, Uhie na-acha ọkụ ọkụ, Linear LED na-agbanwe agbanwe na mmalite mmalite n'oge 2008-2011. E nyere ọrụ OEM & ODM. ya na ndi oru R&D siri ike na ndi okacha amara nwere otutu afo nke ihe omuma na ihe omuma nke LED & ihe ndi ozo, nke nwere ike ikwe nkwa kachasi nma ya na ogologo ndu ya. Anyị na-enyekwa atụmatụ imepụta ọkụ. Nke anyi Ikanam Ikanam ọkụ, Ingund Ikanam ọkụ, Ọdọ mmiri ọkụ, Nkwụ Osisi Nkwụ, Mgbanwe Ikanam warara, CNC Igwe ọkụ na EC, RoHS, FCC, TUV, SAA, ISO9001 kwadoro.
Osisi nkwụ nkwụ
48W Palm Tree Up Lights dị mma maka ụlọ, ụlọ oriri na ọ hotelsụ ,ụ, klọb obodo, ụlọ ahịa azụmahịa, ogige ntụrụndụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwa nkwụ nkwụ niile. Enwere ike iji ya dị ka nkwụ nkwụ, bulie ọkụ ma ọ bụ n'otu oge ahụ. Ọdịdị yiri mgbaaka na-amụnye nkwụ n'ọchịchịrị n'abalị, Mee ka ụwa gị dị! Site na nha dị iche iche na watts sitere na 12W-72W Palm Tree Up Lights Ihe niile dị na aluminom ma ọ ga-ata nchara ịhapụ osisi ahụ enweghị nsogbu IP65 mmiri na-adịghị mma, iko dị jụụ AC100-250V ma ọ bụ AC / DC 24V CREE 3030 LED Inside White White, Nature white, Cool White, Red, Green, Blue, Yellow, Golden, RGB Change, DMX512 8, 15, 30,60 ìhè doo n'akuku dị
Nkwụ Mgbanaka Osisi Nkwụ
Ọkụ ndị yiri mgbaaka na-amụnye nkwụ n'ọchịchịrị n'abalị, nkwụ nkwụ ọkụ nkwụ bụ ezigbo maka ụlọ, ụlọ oriri na ọ hotelsụ ,ụ, klọb obodo, ogige azụmahịa, ogige ntụrụndụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwa nkwụ ọ bụla. Enwere ike iji ya dị ka nkwụ nkwụ, ọkụ ala ma ọ bụ ha abụọ n'otu oge ahụ Withdị dayameta dị iche iche na watts sitere na 12W-72W Ihe niile dị na aluminom agaghị eme nchara ịhapụ osisi ahụ adịghị emerụ IP65 mmiri na-adịghị mma, iko dị jụụ AC100-250V ma ọ bụ AC / DC 24V CREE 3030 Ikanam n'ime Ọkụ Na-ekpo Ọkụ, Ihe okike na-acha ọcha, Cool White, Red, Green, Blue, Yellow, Golden, RGB Change, DMX512 8, 15, 30,60 ìhè doo n'akuku dị
Nkwụ Lighting Ring
Ọkụ ndị yiri mgbaaka ka ha na-amụnye nkwu ọkụ n’abalị, Ihe nkwụ nkwụ nkwụ na-adị mma maka ụlọ, ụlọ oriri na ọ hotelsụ ,ụ, klọb obodo, ogige azụmahịa, ogige na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwa nkwụ ọ bụla. Enwere ike iji ya dị ka nkwụ nkwụ, ọkụ ala ma ọ bụ abụọ n'otu oge ahụ differentdị dayameta dị iche iche na watts site na mgbanaka ọkụ ọkụ nkwụ 12W-72W Ihe niile mejupụtara bụ aluminom na agaghị agba nchara na-ahapụ osisi ahụ adịghị emerụ IP65 mmiri na-adịghị mma, iko obi AC100- 250V ma ọ bụ AC / DC 24V CREE 3030 Ikanam n'ime Ọkụ Na-acha Ọkụ, Ọdịdị ọcha, White Cool, Red, Green, Blue, Yellow, Golden, RGB Change, DMX512 8, 15, 30,60 ìhè doo n'akuku dị
Ogige Spike Light
Ọkụ na-enwu gbaa, ma ọ bụrụ na ọkụ ọkụ na-ese ọkụ, mgbe ahụ, ọkụ ọkụ na-acha ọkụ bụ brushes. A na-eji ntụpọ Spike iji mesie ike na ọkụ n'èzí - iji kpọọ uche gaa na ụkpụrụ ụlọ ma ọ bụ ọdịdị ihu ala. N'adịghị ka ọkụ mmiri nke na-enye ìhè n'ofe sara mbara, ọkụ ọkụ nwere oghere dị warara karịa ka ha nwee ike ilekwasị anya n'otu ihe n'otu oge.
Inglong Uplight AS usoro
Inglight Uplight, ikanam Ingland Lights & ihu igwe na-acha ọkụ ọkụ na China, imepụta ọkụ ọkụ n'èzí, eriri ọkụ ọkụ ọkụ, isi iyi ọkụ ọkụ.
Inground Ìhè AR Series
Inground Lights AR Series na AR COB Series, AR nwere ike ịhọrọ site na 8 Ogo na 120 degrees doo angle. Mana AR COB na ogo ogo 120 kwadoro na obosara obosara. Ọ na-eji maka iche iche odida obodo ebe.
Ikanam Inground Ìhè AE Series
Ikanam Ingland Lights & ihu igwe na-enwu ọkụ ụlọ ọrụ ọkụ na China, imepụta ihe ngosipụta n'èzí, ọkụ ọkụ ọkụ, isi mmiri ọkụ.
In-ground Ikanam Ìhè AD Series
Inground LED Lights & ntụgharị ala ọkụ ọkụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na China, imepụta nke Ikanam Ikanam, ikanam Wall Washer, Iyi Ikanam ọkụ
Ikanam Mgbidi Mgbidi WW15
WW15 Series LED Wall Washers bụ ọgbọ na -esote nke usoro nchacha mgbidi nke ejiri arụmọrụ na -abawanye, arụmọrụ, mmepụta ọkụ na nhọrọ njikwa ndị ọzọ. Usoro WW15 dabara maka ngwa ịsa ahụ mgbidi n'èzí ma enwere ike ịchịkwa ya n'enweghi onye njikwa DMX maka agba dị mfe na mmetụta na-agbanwe agba. Njikwa DMX bụ nhọrọ maka mmemme ọkụ ọkụ dị elu na agba ndị akọwapụtara. Mgbakwunye ahụ na -arụ ọrụ na DC24V, 120V ma ọ bụ 277V AC hardwire ngwa.
Mgbidi mgbidi LED WW10 Series
Wall Washer LED WW10 Series bụ ọgbọ na -esote usoro nchacha mgbidi nke ejiri arụmọrụ na -abawanye, arụmọrụ, mmepụta ọkụ na nhọrọ njikwa ndị ọzọ. Usoro WW10 dabara maka ngwa ịsa ahụ mgbidi dị n'èzí, enwere ike ijikwa ya n'adabereghị na onye njikwa DMX maka agba dị mfe na mmetụta na-agbanwe agba. Njikwa DMX bụ nhọrọ maka mmemme ọkụ ọkụ dị elu na agba ndị akọwapụtara. Mgbakwunye ahụ na -arụ ọrụ na DC24V, 120V ma ọ bụ 277V AC hardwire ngwa.
Mgbidi Mgbidi Mgbidi WW8
Usoro WW8 bụ ọgbọ na -esote usoro nchacha mgbidi nke ejiri arụmọrụ na -abawanye, arụmọrụ, mmepụta ọkụ na nhọrọ njikwa ndị ọzọ. Usoro WW8 dị mma maka ngwa ịsa mgbidi n'èzí ma enwere ike ịchịkwa ya n'enweghi onye njikwa DMX maka agba dị mfe na mmetụta na-agbanwe agba. Njikwa DMX bụ nhọrọ maka mmemme ọkụ ọkụ dị elu na agba ndị akọwapụtara. Mgbakwunye ahụ na -arụ ọrụ na DC24V, 120V ma ọ bụ 277V AC hardwire ngwa.
Ikanam Wall washer WW7 Series
WW7 bụ ọgbọ na -esote usoro nchacha mgbidi nke ejiri arụmọrụ na -abawanye, arụmọrụ, mmepụta ọkụ na nhọrọ njikwa ndị ọzọ. Usoro WW7 dabara adaba maka ngwa ịsa mgbidi n'èzí ma enwere ike ịchịkwa ya n'enweghi onye njikwa DMX maka agba dị mfe na mmetụta na-agbanwe agba. Njikwa DMX bụ nhọrọ maka mmemme ọkụ ọkụ dị elu na agba ndị akọwapụtara. Mgbakwunye ahụ na -arụ ọrụ na DC24V, 120V ma ọ bụ 277V AC hardwire ngwa.
Igwu Igwu Pool
Ebe igwu mmiri na-egwu mmiri & ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ na China, imepụta ọkụ ọkụ n'èzí, ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, ihe a na ọnụahịa asọmpi na 6W, 9W, 12W, 15W, 18W na 24W Igba mmiri ọkụ.
N’ime ọkụ ọdọ mmiri dị n’ime ala
N’ime ala ọdọ mmiri Ọdụdọ na ihu igwe na-acha ọkụ ọkụ na China, onye na-emepụta ọkụ ọkụ n’èzí, ọkụ ọkụ mmiri, ọkụ ọkụ mmiri
Par56 Ikanam Pool Ìhè
Anyị nwere 3 iche iche nke Par56 Ikanam ọdọ mmiri ọkụ dị iche iche na ihe onwunwe. Ọ nwere ike ịbụ n'ime ime akara ke RGB nrọ agba ma ọ bụ ka ọ gbanwee agba na-akpaghị aka. Dị nnọọ ogologo ndụ na 3 afọ akwụkwọ ikike
Ikanam Pool ọkụ A Series
A na-amata ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ maka arụmọrụ ha, ọtụtụ agba nwere ike imegharị na-enweghị mkpa iji nzacha ọzọ. Ọkụ ọkụ ọkụ na-adịgide adịgide na-adịgide adịgide na ọnụọgụgụ oge ha gbanyụrụ ma na-eme, ihe a na-eme mgbe niile na ọkụ ọkụ mmiri, enweghị mmetụta na ndụ ha bara uru. Anyị nwere ike nweta agba ọ bụla site na iji ngwakọta njikwa DMX512.
Ikanam Mgbanwe DRL Light Bar
LED na -agbanwe agbanwe DRL Light Bar Patented item. Ọ bụ ụdị n'ụdị agwọ na -eribiga nri ókè, Osram 5050 LED n'ime. ọ nwere ike ịdọrọ uche gị. Ọdịdị ọdịdị pụrụ iche, imewe ahụ sitere n'ike mmụọ "oke nri" Bendable, nakweere isi ọkụ ọkụ na-ebubata LED dị elu, lampshade na-anabata oghere condenser maka mmepụta ọkụ siri ike, imewe pụrụ iche, nwere ike gbue ogo 360 maka nrụnye n'akụkụ dị iche iche; Oke sara mbara dabara adaba maka ọnọdụ nrụnye mgbagwoju anya nke ụgbọ ala ahụ; a kwadebere azụ nwere nnukwu nrapado nwere akụkụ abụọ, na nsọtụ abụọ nke ahụ oriọna nwere oghere mkpọchi iji kpọchie kposara. A kaa akara oriọna ahụ, ọ nweghịkwa mmiri. Igwe anaghị agba nchara IP67
Ogwe ọkụ ọkụ COB
Ogwe ọkụ ọkụ ọkụ COB, ibe dị na bọọdụ aluminom, ogologo ndụ ogologo na mbelata ọkụ dị ala, luminescence dị otu, na -echebe anya, ọ naghị egbu maramara.
240V LED Neon Linear - Linear mgbanwe Ikanam luminaire maka n'èzí ụkpụrụ ụlọ ọkụ na a zuru okè homogeneous na ntụpọ free ìhè n'elu. Ihe ohuru emere site na uzo uzo abuo nke uzo a mepere uzo ohuru nke ihe omuma nke ndi oria obula gh’enweta. Ngwunye ọkụ anyị na-enweta ngwa ngwa na-enweta mmata nke ndị ọkachamara na-emepụta ọkụ na ndị ọkachamara n'ọhịa - a na-edepụtaghachikarị, ọ dịghị mgbe ha nhata.
110V LED Neon Linear. N'ime afọ ndị gara aga, anyị achịkọtala ntinye na echiche sitere n'aka ndị na-emepụta ọkụ, ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ, ndị injinia. anyị mepụtara ezi Agba. Ezi agba bụ onye na-acha ọkụ ọkụ na-eji teknụzụ polyurethane encapsulation ọhụrụ na-enye ihe nchekwa IP67 na-arụ ọrụ yana yana ntụgharị ntụgharị dị mma nke ụdị LED dị iche iche, na-ezere ntụgharị CCT ọ bụla: Ezi Agba. Ọ dị na 2 dị iche iche. Aha izizi aha ya bụ Top View na-eweghara ngwa nke onye bu ya ụzọ kpuchie maka 2D gbagọrọ agbagọ dị ka akụkụ dị ogologo. Dị nke abụọ na-agbatị ókè nke imepụta ọkụ site na ịnye ahịrị ọkụ zuru oke zuru oke nke nwere ike gbagọrọ agbagọ ma ọ bụ gbagọrọ agbagọ na 3 akụkụ (3D) iji soro usoro ọ bụla dị ugbu a. Ma Top
Igwe ọkụ CNC Machine
Igwe ọkụ ọrụ CNC na -eme ka afọ rụọ ọrụ na -enweghị mmezi maka ọnụ ahịa belatara, ọhụhụ ka mma maka nyocha anya mmadụ, na -eduga n'ịdị mma ngwaahịa na arụpụta ihe. Ọkụ ọkụ ọkụ na -edochi fluorescents ngwa ngwa maka ịrụ ọrụ ka mma na -arụ ọrụ yana belata ngbanwe, mmezi yana ọnụ ahịa ume. Igwe ọkụ CNC Machine, nrụpụta ọkụ ụlọ ọrụ yana ngwa akụrụngwa. Anyị na -echekwa igwe nrụpụta igwe ọkụ ọkụ LED nke dabara maka gburugburu ụlọ ahịa igwe siri ike. ụdị tubular, ụdị agbakwunyere nnukwu ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ LED na -adịgide adịgide ma dabara adaba maka igwe ịsacha - na -eguzogide mmiri, mmanụ, igwe nju oyi na kemịkal ndị ọzọ. Ihe nkwado braịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịfe nke nke nkenke na -arụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ igwe CNC. Ọ bụrụ na ịhụghị CNC Machine Work Light nke ahụ
Igwe ọkụ CNC nwere ihu abụọ
Igwe ọkụ CNC nwere akụkụ abụọ na -eme ka afọ rụọ ọrụ na -enweghị mmezi maka ọnụ ahịa belatara, ọhụhụ ka mma maka nyocha anya mmadụ, na -eduga n'ịdị mma ngwaahịa na arụpụta ihe. Ọkụ ọkụ ọkụ na -edochi fluorescents ngwa ngwa maka ịrụ ọrụ ka mma na -arụ ọrụ yana belata ngbanwe, mmezi yana ọnụ ahịa ume. Igwe ọkụ CNC nwere akụkụ abụọ, nrụpụta ọkụ ụlọ ọrụ na ngwa ngwa igwe. Anyị na -echekwa igwe nrụpụta igwe ọkụ ọkụ LED nke dabara maka gburugburu ụlọ ahịa igwe siri ike. ụdị tubular, ụdị agbakwunyere nnukwu ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ LED na -adịgide adịgide ma dabara adaba maka igwe ịsacha - na -eguzogide mmiri, mmanụ, igwe nju oyi na kemịkal ndị ọzọ. Ihe nkwado braịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịfe nke nke nkenke na -arụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ igwe CNC. Ọ bụrụ na ịhụghị CNC Machine Work
Tube LED CNC Machine Work Lights na -eme ka afọ rụọ ọrụ na -enweghị mmezi maka ọnụ ahịa belatara, ọhụhụ ka mma maka nyocha anya mmadụ, na -eduga n'ịdị mma ngwaahịa na arụpụta ihe. Ọkụ ọkụ ọkụ na -edochi fluorescents ngwa ngwa maka ịrụ ọrụ ka mma na -arụ ọrụ yana belata ngbanwe, mmezi yana ọnụ ahịa ume. Tube LED CNC Machine Work Lights, nrụpụta ọkụ ụlọ ọrụ yana ngwa akụrụngwa. Anyị na -echekwa igwe nrụpụta igwe ọkụ ọkụ LED nke dabara maka gburugburu ụlọ ahịa igwe siri ike. ụdị tubular, ụdị agbakwunyere ọrụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ LED na -adịgide adịgide ma dabara adaba maka igwe ịsacha - na -eguzogide mmiri, mmanụ, igwe nju oyi na kemịkal ndị ọzọ. Ihe nkwado braịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịfe nke nke nkenke na -arụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ igwe CNC. Ọ bụrụ na ịhụghị CNC
Ikanam Oriọna N'ihi CNC Machine
Ọkụ oriọna Maka igwe CNC, B0012-22WL44 nwere asambodo CE EMC. Nkwụsi ike karịa, ọkụ ọkụ igwe CNC na-anaghị enwu enwu, Igwe oriọna CNC nke igwe na-eme ka afọ rụọ ọrụ na-enweghị mmezi maka ọnụ ahịa belatara, ọhụhụ ka mma maka nyocha anya mmadụ, na-eduga n'ịdị mma ngwaahịa na arụpụta ihe. Ọkụ ọkụ ọkụ na -edochi fluorescents ngwa ngwa maka ịrụ ọrụ ka mma na -arụ ọrụ yana belata ngbanwe, mmezi yana ọnụ ahịa ume. Igwe ọkụ LED na -arụ ọrụ maka igwe CNC, nrụpụta ọkụ ụlọ ọrụ yana ngwa akụrụngwa. Anyị na -echekwa igwe nrụpụta igwe ọkụ ọkụ LED nke dabara maka gburugburu ụlọ ahịa igwe siri ike. ụdị tubular, ụdị agbakwunyere ọrụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ LED na -adịgide adịgide ma dabara adaba maka igwe ịsacha - na -eguzogide mmiri, mmanụ, igwe nju oyi na kemịkal ndị ọzọ. Universal arịọnụ eji
“Tomb” nke oriọna na -adịghị ahụkebe, okporo ụzọ na -eduga na ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọhụrụ
Ụbọchị: 09 / 10 / 2021
Mgbe Edison, bụ onye chịkọbara ahịa isi obodo, bulbs bulbs, ngwa nke bọlbụ batara n'oge ọganihu ngwa ngwa. Dabere na data nyocha nke Fouquet na Pearson bipụtara, ka anyị na -etinye ...
Ọhụụ ìhè n'ọdịnihu bụ ọkụ laser ma ọ bụ OLED ọkụ?
Ụbọchị: 24 / 08 / 2018
E nwere ugbua abuo di iche iche nke ndi na-acho onwu ala: Diana, OLED. Ugbua ndị dị ugbu a dị ntakịrị n'ogo (ihe dịka otu mita millimita) ma na-egbuke egbuke. E mepụtara banyere ...
Nkwuputala nke aha ụlọ ọrụ gbanwere
Ụbọchị: 04 / 06 / 2018
Ezigbo Ndị Ahịa, Ndị Na-eweta Ihe, na Ndị Ahịa Ahịa; Na-arụ ọrụ na June 2th 2018, anyị nwere obi ụtọ ịkpọsa na anyị na-agbanwe aha ụlọ ọrụ anyị: LongNor Optoelectronics Co., Limited Our ...
Ụzọ na-aga n'ihu n'ọdịnihu Green-tube ìhè
Ụbọchị: 15 / 12 / 2016
Ọ bụ ezie na agụụ anyị maka ọkụ ọkụ eletrik nọgidere na-abawanyewanye, otú ahụ ka anyị si mara mkpa ọ dị iji mezuo arụmọrụ ya. Otu uzo nke oru oru ahia obula abughi nani ...
Uwa nke na-enye ìhè (LED) bụ ngwaọrụ ihe ọkụkọ nke na-agbanwe ọkụ eletrik dị ka ìhè. Ọkụ ọkụ ọkụ anọwo ebe ọ bụ na 1960s, ma ugbu a na-amalite na-egosi na obibi obibi marke ...
Ìhè ụlọ nkwari akụ
Hot Spring Club nkwari akụ Lighting Engineering Design
LED Neon Flex maka Osimiri Ise Okpokoro Ịgba Ọkụ
Ụlọ Ịzụ Ụlọ Ụlọ Ịzụ Ụlọ ahịa
LED Neon Flex maka Bingo Casino
Ikanam Neon Flex maka Bingo cha cha ...
Dị ka anyị na Facebook
Lelee anyị na YouTube
LongNor Optoelectronics Co., Dịchi
Tinye: LiHe Industrial Zone, NanShan, ShenZhen, China
Copyright © 2007-2021 LongNor Optoelectronics Co., Ltd. Ikike Niile Echekwabara